DC Gear Motor yekutengesa, yakakwira torque geared dc motor
Diki DC Gear Motor
DC giya mota 100 rpm
DC giya mota 24v
DC giya mota ine encoder
Mari uye Bhangi
Worm DC giya mota
Ndekupi kwandingawane chekureva zvigadzirwa?
Ko nezve yako DC Gear Motors 'kunaka?
Nzira yeku Sarudza chaiyo DC Gear Motor?
Ungava sei mumiririri wako?
Unoda Bvunza nezve rako bhizinesi?
Sogears Kugadzira uye Injiniya hwave uchishanda kubvira 1993, kugadzira uye kugadzira refu-refu refu torque geared dc mota. High Performance kune Chero Chigadzirwa. Hunhu Inosimbiswa.
Isu tine ruzivo rwekunze hwekutanga tekinoroji, michina yepamusoro, timu yekutarisira uye kupedza iyo maitiro, asi zvakanyatsoenderana neso9001 / ts16949 inogadzirisa kugadzirwa, nekudaro ichive nechokwadi chemhando yega yega yezvigadzirwa zvakagadzirwa.
Ndekupi kwandingawane ruzivo pamakambani akazvimirira?
Kunyange "mutengo unonzwisisika, inokurumidza kuburitsa nguva" yekumisa mukurumbira wakanaka pakati pevatengi, kambani ine vanoverengeka vevanoshandisa mudzimba uye vagadziri kuti vatange kudyidzana kwakasimba pakati pekupa uye zvinodiwa. nepo 90% yezvigadzirwa zvekambani iyi zvinotumirwa kune dzimwe nyika dzakabatana, germany, japan, italy, malaysia, australia, nechepakati kumabvazuva uye kune dzimwe nyika nematunhu. kurumbidzwa nevashandisi. Nekudaro, Kana iwe uchida kufambidzana nesu, tinokwanisa kuronga vatengi vedu munyika yako kuti vakutumire mamwe masampire ereferensi yako kana kuti tinokwanisa kukutumira zvakananga.
Yakakura sei chirongwa chejekiti?
Yedu yakakwira Mhando yekugadzira masisitimu ndeye simbiso yekusingakwanise performance.Our kambani inoomerera kune manejimendi yekutarisira yemhando yekutanga, mukurumbira supreme.Our yakakwirira torque yakagadzirirwa dc motor yakagadzirirwa zvese, zvemukati nekushandisa kwekunze. Ivo vane yakanyarara mashandiro, yakaderera-vibration dhizaini, uye compact zviyero, ivo vanoita zvinopfuura kutarisira. Izvi zvimiro zvinongowedzerwa chete nezvavanosarudza zvakawanda zvekukwira.
Ungasarudza Sei Rudyi DC Gear Motor?
1. Ziva zvaunoda kunyorera.
Nhanho yekutanga yekusarudza mota yeiyo dc inoongorora zvaunoda kuita. Izvi zvinosanganisira asi hazviremi kune zvinotevera:
Input simba simba: Voltage, frequency (Hz), yakanyanya iripo (Amps) uye kutonga mhando, kana iripo.
Gearmotor yakatarwa: Saizi, uremu, inodiwa ruzha nhanho, hupenyu hwehupenyu uye huwandu hwekugadzirisa.
Kuita kweGearotor: kumhanya, torque, kutenderera kwemabhiza, kutanga uye kumhanya torque (yakazara mutoro).
Nzvimbo yekushanda: dc giya mota ine encoder, Chikumbiro uye ambient tembiricha, uye ingress kuchengetedzwa (IP) chiyero.
2. Sarudza yakakodzera dc gear mota.
Tevere, shandisa yako runyorwa rwezvinodikanwa zvekushandisa uye wofananidza ivo kumota dzemhando dzemhando dzakasiyana dzaunofarira dzakadai seyose, brushless kana isingagumi magneti gearmotor. Nekuti yega yega application ine yayo yega yakasarudzika hunhu uye zvaidikanwa, zvakakosha kuti uone kuti ndeipi senge simba remabhiza, kutanga torque kana kushanda kwakanyanya kunokosha kune yako application. Pakati pechikamu ichi, unogona kusarudza kuti kuenzanisa giya bhokisi uye mota zvakasiyana zvichizokwana zvaunoda.
3. Ziva zvekumhanya uye torque zvinodiwa kuti mutoro unotungamirwa.
Kuti uve nechokwadi chekuti gearmotor yako yakaenzana neshure kwechigadzirwa chako chakakodzera, zvakakosha kuti uzive yako yekubuda nekumhanya, semuenzaniso dc gear mota 100 rpm, kutanga uye kumhanya torque. Kusarudza iyo yakakodzera gearmotor inyaya yekufananidza nekubuda kwekumhanyisa (RPM) uye torque kune chako chinodiwa. Iyo yekubuda nekumhanyisa yakatemwa nemuchina wako, uye inofanirwa kuzivikanwa. Izvo zvinosiya iyo yekutanga uye inomhanya torque kuve yakatsunga. Ramba uchifunga, kana iwe ukasarudza iyo yakafanogadzirwa injeri gearmotor, mugadziri wacho akaita zvakanyanya kusimudza zvinorema kuti ave nechokwadi chekuti mota negearbox zvichashanda zvisina musindo.
Paunenge iwe woverengera yako yekutanga uye yekumhanya torque, shandisa iyo yekugadzira yekugadzira curve ye torque, kumhanya uye kushanda zvakanaka kuti uwane mota inoenderana nezvaunoda. Wobva waongorora zvinogona kuvezwa magadzirirwo anosanganisira kumhanya (yakazara-mutoro) gearbox torque, yekumhanya mhanyisa, gearbox inobereka simba, hunhu hwekushisa uye basa mitunhu.
Paunenge uchinge wasarudza gearmotor, zvakakosha kumhanya dzinoverengeka miedzo kuona kuti mota inofamba zvakanaka munzvimbo yakajairika yekushandisa. Kana mota ikatanga kupisa zvisingaite, ine ruzha zvakanyanya, kana kuoneka yakamanikidzwa, dzokorora nzira yekusarudza mota kana kubata runhare.
Kutora nguva yekuyera zvakanaka gearmotor yako kunobatsira kuve nechokwadi kuti ichagara kwemakore uye ichishanda nepamusoro pakubata.
Ndingaiwana kupi Iyo Economist?
Ndokumbira utumire ruzivo rwako rwese kuemail [email inodzivirirwa] uye yaizoendeswa kune maneja wedu. Vachatarisa uye vopa yako mhinduro.uye ipapo, isu tingafanira kusangana wega kuti titaure mberi.
Bata nesu nhasi uye utore yako yekutanga
Tifonere chero kwekubvunda
kana kuti titumire email